भारतमा अगष्ट १५ सम्म कोभिड-१९ विरुद्धको खोप तयार हुन सक्ने – हिमालयन ट्रिबुन
जङ्गीअड्डामा सुरक्षा तथा व्यवस्थापन केन्द्र संचालनमा
२०७७ माघ ४, आईतवार १६:४७
२०७७ असार २०, शनिबार ०९:४७
भारतमा अगष्ट १५ सम्म कोभिड-१९ विरुद्धको खोप तयार हुन सक्ने
HT २०७७ असार २०, शनिबार ०९:४७
भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् आईसीएमआरले कोरोनाभाइरसविरुद्धको खोप अगस्ट महिनाको १५ तारिखसम्म सर्वसाधारणका लागि उपलब्ध हुन सक्ने बताएको छ । परिषद्ले खोपको परीक्षणमा संलग्न संस्थाहरूलाई पत्र लेखेर यस्तो जानकारी गराएको हो । भारतमा विकास भइरहेको उक्त खोप आईसीएमआर र हैदराबादस्थित भारत बायोटेक कम्पनी मिलेर बनाइरहेका छन् ।
क्लीनीकल परीक्षण पूरा भएमा अगस्ट १५ अर्थात् भारतको स्वतन्त्रता दिवसको अवसर पारेर यो खोप सर्वसाधारणहरूका लागि उपलब्ध गराउन सकिने आईसीएमआरको भनाइ छ । खोपको क्लीनीकल परीक्षणका लागि भारतका १२ संस्थालाई चुनिएको छ । आईसीएमआरका निर्देशक डा. बलराम भार्गवले जुलाई २ मा ती १२ संस्थालाई आगामी जुलाई ७ सम्ममा परीक्षणको स्वीकृति लिइसक्नुपर्ने बताएका छन् ।
पत्रमा उनले लेखेका छन्, ‘कोरोनाभाइरस रोक्नका लागि आईसीएमआरले विकास गरेको खोपको परीक्षण तीव्र गतिमा अघि बढाउनका लागि भारत बायोटेक कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको छ।’ कोरोनाभाइरसको एउटा स्ट्रेन निकालेर यो खोप विकास गरिएको हो। क्लीनीकल परीक्षण पछि आईसीएमआर यो खोप अगस्ट १५ सम्ममा सर्वसाधारणसम्म पुर्याउन चाहन्छ ।
भारत बायोटेक पनि युद्धस्तरमा काम गरिरहेको छ। तर यो खोपको सफलता क्लीनीकल परीक्षणका लागि चुनिएका संस्थाहरूको सहयोगमा निर्भर गर्छ। । बायोटेक कम्पनी मार्फत विकास गर्न लागिएको खोपको नाम कोभ्याक्सीन हो । भारत बायोटेकले ट्विटरबाट जुन २९ तारिखमा यो खोपको मानव शरीरमा गरिने परीक्षणबारे जानकारी गराएको थियो । महाराष्ट्र सरकारले बनाएको कोरोना टास्क फोर्सका सदस्य डा. शंशाक जोशी यति कम समयमा खोप बनाउनु लगभग असम्भव भएको बताउँछन् ।
‘सामान्यतया एउटा खोप बनाउन दुई वर्ष लाग्छ। निकै छिटो काम गरिए पनि कम्तीमा १२ देखि १८ महिना लाग्छ । त्यसभन्दा अघि नै खोप बनाउने कुरा असम्भव छ।’ स्वास्थ्य विशेषज्ञ र इन्टरनेशनल एसोसिएशन अफ बायोएथिक्सका पूर्वअध्यक्ष डा. अनन्त भान पनि आईसीएमआरको योजनाले छक्क परेका छन् ।
उनी भन्छन्, ‘खोपलाई क्लीनीकल परीक्षणका लागि जुलाई ७ सम्ममा दर्ता गरिसक्न भनिएको छ। हालसम्म यसले प्री क्लीनीकल परीक्षणको अवस्था नै पूरा गरेको छैन भने कसरी अगस्ट १५ मा यसलाई सार्वजनिक गर्न सकिन्छ?’ के एक महिनाभन्दा कममा यो खोपसँग सम्बन्धित जोडिएका परीक्षण पूरा गर्न सकिन्छ ? के यो खोपको गुणस्तर बारे पहिलेदेखि नै धारण बनाई सकिएको छ?
नागाल्यान्डमा कुकुरको मासु कारोबारमा प्रतिबन्ध
Spread the loveभारतको नागाल्यान्ड राज्यले कुकरको मासु कारोबार तथा आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। उक्त कदमलाई पशु अधिकारवादीहरूले स्वागत गरेका छन् । पशु कल्याणको क्षेत्रमा कार्यरत समूहहरूले निरन्तर अभियान चलाएसँगै भारतको उत्तर पूर्वी राज्य सरकारले त्यस्तो घोषणा गरेको हो । उक्त घोषणालाई त्यस्ता समूहले भारतमा कुकुरमाथि हुने क्रूरताको अन्त्य गर्ने प्रमुख […]
२०७७ मंसिर २६, शुक्रबार ०४:३१
अमेरिकामा फाइजरको खोप स्वीकृति दिन सिफारिस
२०७७ कार्तिक ४, मंगलवार ०६:२८
चितवन, धरान र रुपन्देहीमा गरी थप चार जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु
२०७७ भाद्र ३१, बुधबार १०:११
कुलमानको समर्थनमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरी हस्तक्षेप
२०७७ असार ६, शनिबार ०९:०२
दुबईबाट फर्केका गर्भवतीहरुलाई सरकारी अधिकारीहरुको दुव्र्यबहार(भिडियोसहित)
२०७७ असार २४, बुधबार ०३:५३
शैलेश थापा क्षेत्री नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा बढुवा
२०७७ भाद्र १९, शुक्रबार १०:३१
महासङ्घद्वारा रोजगारदाता परिषद् गठन
प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा वाग्मती र आर्मी विजयी
संसारकै सबैभन्दा शक्तिशाली बन्ने ठानिएको रकेटको इन्जिनको परीक्षण रद्द